10 Ndima yeBhaibheri Haufanire Kukanganwa Paunenge Uchirwara | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Mavhesi eBhaibheri 10 Ndima yeBhaibheri Haufanire Kukanganwa Paunenge Uchirwara
Nhasi tichange tichishanda nendima dzeBhaibheri gumi dzausingafanire kukanganwa kana uchirwara. Patinenge tiri sick, chinhu chete chinouya mupfungwa ndechekuti tingaite sei kupora. Kurwara chinhu chinotyisa. Dzimwe nguva irwo rudzi rwakakosha rwe muedzo uye kuyedzwa uko mutendi aifanira kupfuura nako, rangarira nyaya yaJobho?. Kurwara kunozadzwa nemarwadzo uye kusuwa. Ndinonamata kuti hapana mumwe wedu arware muzita raJesu.
Nekudaro, kana iwe uchirwara, heino gumi Bhaibheri vhesi rausingafanire kukanganwa.
Pane mumwe pakati penyu ari kutambura here? Ngaave anonamata. Pane munhu anofara here? Ngaaimbe rumbidzo. Pane munhu anorwara pakati penyu here? Ngaadane vakuru vekereke, uye ngavamunamatire, vachimuzodza nemafuta muzita raIshe.
Kune kupora mukurumbidza. Kana isu tichirumbidza Mwari, tinoporeswa kubva kumarudzi ese ezvirwere kana zvirwere. Iwe unofanirwa zvakare kurangarira kuti munamato unoshanda weakarurama unowana. Hazvishamise kuti rugwaro runoraira kuti munhu anorwara anofanira kudaidza vakuru vechechi, ngavamunamatire uye vamuzodze nemafuta muzita raIshe.
Iwe haufanirwe kukanganwa kuti kuzodzwa kunotyora joko. Kana murume akazodzwa, joko rehurwere rinoparara.
Isaya 41: 10
usatya, nekuti ndinewe; usavhunduka, nekuti ndiri Mwari wako; Ndichakusimbisa, zvirokwazvo, ndichakubatsira; ndichakutsigira noruoko rwangu rworudyi rworudyi.
Dzimwe nguva patinenge tichirwara, tinotya. Dzimwe nguva hatizive zvekuita. Kunyanya kana isu takatora zvinodhaka uye zvinoita sekunge kurwadziwa kana kurwara hakuzongoperi. Gara uchiziva kuti Mwari anemi kunyange muchirwere chinotyisa icho uye Iye achakubatsira kubva machiri.
Hosha iyoyo haizokukundi, kana muchirangarira izvi, inokupai simba rekurwisa chirwere ichi.
Uye munyengetero wekutenda uchaponesa uyo unorwara, uye Ishe uchamumutsa. Uye kana akaita zvivi, achakanganwirwa. Naizvozvo reururiranai zvivi zvenyu kunamatirana, kuti muporeswe. Munamato wemunhu akarurama une simba guru sekushanda kwawo.
Rangarira kuti pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Uyo anogashira kubva kuna Mwari anofanira kutenda kuti Iye ndiMwari uye Anopa mubairo kune avo vanomutsvaga nekushingaira. Paunonamata nekutenda, hurwere hunonyangarika. Mwari vanoregerera chero chitadzo chiri kukonzeresa hurwere muhupenyu hwako uye unozopora.
Nekudaro, zvisati zvaitika, unofanira kureurura zvivi zvako. Rangarira bhuku rezvirevo rinoti uyo anohwanda zvivi zvake haabudirire asi anozvireurura achawana tsitsi. Reurura zvivi zvako, namata nekutenda uye uchapora kubva pakurwara ikoko.
Pisarema 30: 2-3
Jehovha Mwari wangu, ndakachema kwamuri, mukandiponesa. Jehovha, makabudisa mweya wangu paSheori; makandimutsira upenyu pakati pavaya vakaburukira kugomba.
Ishe ndiye rubatsiro rwedu panguva yematambudziko. Kana dambudziko rehupenyu rasvika patiri, hatifanirwe kuneta kuchemera rubatsiro, rubatsiro rwedu runobva kunaIshe. Rangarira kuti Mwari ndivo vanogona kudzorera hutano hwakanaka. Usamhanye helter skelter kunzvimbo dzausingakwanise kuwana rubatsiro, takura mutoro wako kuna ishe muminamato.
Pisarema 103: 13-14
Sokunzwira tsitsi kwababa vana vake, Saizvozvo Jehovha anonzwira tsitsi vanomutya. Nekuti iye anoziva chimiro chedu; anorangarira kuti tiri guruva.
Dhiabhori anogona kuedza kukutambisa kana iwe uchirwara. Unokona kunge uchinzwa zvakashata kuti hurwere hwako hahuperi. Izvi zvinogona kuumba kutya kusingafadzi mumoyo mako.
Ziva izvi uye uzive rugare, Mwari vachakuratidza tsitsi. Kana baba vedu vepanyika vakaita nenzira yakakodzera yekuratidza tsitsi patinenge tichida imwe chete, ndizvo zvakaita baba vedu vekudenga.
Pisarema 41: 3
Jehovha anomutsigira pamubhedha wourwere; pakurwara kwake unomudzosera pahutano hwakakwana.
Mwari mukuru kudzorera. Vakati vachadzorera makore egomarara rakatitorera. Saka zvakare Akavimbisa kutidzorera kuhutano huzere. Iye ndiye anokwanisa kutitsigira, Iye oga ane simba rekudzorera hutano hwakanaka uye Akavimbisa kuita izvozvo. Usatya, nekuti Mwari anewe.
Ngaarumbidzwe Mwari naBaba vaIshe wedu Jesu Kristu, Baba vetsitsi uye Mwari wekunyaradza kwese, unotinyaradza padambudziko redu rose, kuti tigone kunyaradza avo vari mukutambudzika kupi nekupi, nenyaradzo yatinayo. isu pachedu tinonyaradzwa naMwari.
Mwari ndiye munyaradzi wedu. Iye anokwanisa kutinyaradza munguva yedu yedambudziko. Zvisinei nekurwadziwa kunotyisa kwekurwara, moyo wako unowana runyararo munaIshe kana iwe uchigona kuvimba nashe uye nekusiira zvese kwaari kuti azviite.
Huyai kwandiri, imi mose makaneta, makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo. Takurai joko rangu, uye mudzidze kubva kwandiri, nekuti ndiri munyoro uye ndine mwoyo unozvininipisa, uye muchawana zororo remweya yenyu. Nekuti joko rangu rakareruka uye mutoro wangu wakareruka.
Mweya wako haudi chinhu kunze kwekuzorora kana uchirwara. Iwe unongoda chimwe chinhu chinobvisa marwadzo uye nekukupa kuzorora kwakanaka. Vazhinji havagone kana kurangarira kekupedzisira pavakarara zvakanaka usiku nekuda kwekurwadziwa kusingaendi. Rugwaro runoti, huyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Zvino iwe unoziva iyo chaiyo nzvimbo yekuwana zororo, enda kuna ishe muminamato.
VaRoma 8: 18
Nekuti ndinoona kuti matambudziko enguva ino aripo haana kufanirwa nekubwinya kuchazoratidzwa kwatiri.
Iwe wakaita segoridhe riri kupinda mumoto. Kana goridhe mukati maro fomu mbishi ichigadziriswa, inobuda muchoto sepfuma inokosheswa. Saka Mwari arikukugadzirira chimwe chinhu chikuru. Kune mufaro mukuru mukuziva kuti zvinhu zvese zvinoshanda pamwechete kune zvakanaka kune avo vanoda Mwari.
Iyi kurwadziwa iriko hapana kana ichienzaniswa nemufaro wave kuda kuzarurwa.
Pisarema 50: 15
Danai kwandiri pazuva renjodzi; Ini ndichakurwira, iwe ugondikudza.
Mwari anogara achida kuzviratidza samambo. Kana uri pakutambudzika, dana kuna Jehovha, uye uchaponeswa.
Previous nyaya5 Zvikonzero VaKristu Vese Vanofanirwa Kuparidza Evhangeri
inoteveraZvikonzero zvishanu Unofanirwa Kushingairira Kuziva Mwari Zvirinani
Kununurwa minamato Yekutanga Vakazvarwa Vanakomana